Pie poti-akoho namboarina (Miaraka amin'ny Puff Pastry!) - Fomba Fanamboarana
inona no hatao amin'ny picatta akoho
mandra-pahoviana handrahoana henan-kisoa amin'ny lafaoro
mandra-pahoviana no andrahoinao ny tongotra akoho
inona no tokony ho fisehoan'ny kisoa masaka
Pie vilany akoho namboarina
Pie vilany akoho namboarina no sakafo fiononana faratampony . Akoho sy legioma efa za-draharaha ao anaty saosy mamy dia napetraka ao anaty a crust flaky !
Ity fomba fahandro mora ity dia tsara miaraka sisa tavela , azo atao mialoha, ary mihamangatsiaka tsara aloha na aorian'ny fanendasana.
Akora vita amin'ny poti-akoho
Ny piso amam-borona dia azo atao toy ny mofomamy vita amin'ny crust roa na amin'ny lovia tsirairay ary asiana mofomamy na mofomamy.
legioma Mampiasa legioma vaovao izahay fa ny anana veggy (na legioma natsatsika sisa tavela) no miasa ao amin'ity resipeo ity ihany koa.
AKOHO Akoho rotisserie no andehanako amin'ity recette ity fa izay akoho masaka / voatetika no mandeha. Mampiasà akoho sisa tavela raha eo am-pelatananao.
saosy Avy amin'ny rangotra ny saosy ary na dia mila fotoana kely aza dia tsy sarotra izany. Ny menaka fanosotra sy akoho dia matevina ary voaharo tongolo, tongolo lay ary anana. Aza mampiasa laoka sodium ambany, ny sira dia manampy tsiro be amin'ity fomba fahandro ity!
mofomamy Mba hahatonga azy io ho haingana kokoa, dia ampiasao koba vita amin'ny vata fampangatsiahana (na mangatsiaka) ho solon'ny crust pie an-trano . Azonao atao koa ny mampiasa mofomamy puff mofomamy ao amin'ity recette ity koa (jereo naoty etsy ambany).
Fomba fanamboarana pie akoho
Mahandro dibera sy tongolo. Manampia karaoty, seleria & katsaka mandra-pahalehibeny. Afangaroy ny lafarinina.
Kapohina amin'ny crème sy broth (isaky ny recette etsy ambany) mandra-pahatongan'ny matevina sy ny menaka.
Ampio akoho, pitipoà ary ovy.
Loza miaraka amin'ny mofomamy ary ampio ny famenoana. Top miaraka amina mofomamy mofomamy faharoa ary manendasa mandra-pahatongan'ny volamena.
Manampia ron-kena / crème kely isaky ny mifangaro isaky ny ampiana mandra-malama. Toa ho matevina izy io amin'ny voalohany fa hizotra rehefa manampy ranoka betsaka ianao.
Maneteza ovy ho cubes kely 1/2 ″ mba hahandro haingana.
Hetezo ny loaka ao anaty mofomamy mba hivoahana.
Avelao hangatsiaka ny pie mba hahafahany manangana kely ary tsy mihazakazaka.
Ny famonoana mofomamy misy atody dia mamirapiratra sy volamena.
Manaova-mialoha sy ambiny
Manoloana izany: Manomàna famenoana araky ny torolàlana ary vata fampangatsiahana hatramin'ny 48 ora. Mizara ho lovia na fenoy crust alohan'ny fanendasana. Raha mangatsiaka ny famenoana dia mety mila mila fotoana fanampiny ianao handefasana hafanana.
Sakafo mangatsiaka: Ity famenoana ity dia azo ajanona alohan'ny fandrahoana. Raha mofomamy ao anaty crine pie ianao dia azo omanina ny pie iray manontolo (hampangatsiaka ny famenoana alohan'ny hikarakarana azy) ary hatsiaka. Arotsaho ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny alina ny mofo ary atsofohy araky ny torolàlana. Raha tsikaritrareo ny crust manomboka mihoapampana alohan'ny mafana ny famenoana dia rakofana foil mba tsy hisorohana be loatra.
Mamerina: Ny ambiny dia azo averina ampiasaina ao anaty lafaoro na microwave. Ny crust dia mirona mankaleo ao anaty microwave ka raha fantatrao fa hanana ambim-bary ianao dia endaso tsirairay ny lapoaly puff ao anaty lovia ary apetaho ao anaty vilia fotsiny ny pie vilany rehefa aroso.
Ankafizin'ny akoho bebe kokoa
Lasopy mofomamy mahandro Cooker miadana - fihodinana mahafinaritra amin'ity resipeo ity
Casserole famenoana akoho - sakafo iray lovia
Mofomamy mofomamy mofomamy mora - kinova hitsin-dàlana
Akoho dibera masaka Cooker - miaraka amin'ny zava-manitra vaovao
Spaghetti akoho an-trano - avy amin'ny resipeo aloha
Easy Chicken Divan - kilasika mahafinaritra iray hafa
Chicken Stroganoff - haingana sy malefaka
Nahafinaritra anao ve ity Pie Chicken Pot Pie ity? Aza hadino ny mametraka hevitra sy naoty etsy ambany!
5Fromdimy ambin'ny folovato FAMERENANAResipeo
Pie akoho mahazatra
Fotoana fanomanana25 minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo32 minitra Fotoana manontolo57 minitra Fanompoana6 servings MpanoratraHolly Nilsson Ny akoho sy ny legioma ao anaty saosy mamy dia apetaka amin'ny crust flaky ho an'ny sakafo mampionona tonga lafatra. pirinty Pin
▢½ tongolo voatetika
▢rOA jirofo tongolo gasy toto-kena-
▢⅓ kapoaka dibera
▢1 KELY ovy voahitsakitsaka sy voadidy ½ '
▢½ sotrokely fanamanam-borona na hanandrana
▢¼ sotrokely ravina thyme
▢⅓ kapoaka koba tsara toto
▢1 ¼ kapoaka ron-kena
▢⅔ kapoaka krema maivana
▢1 kapoaka seleria diced
▢1 ankamaroan'ireo karaoty nopotsehina sy notetehina
▢½ kapoaka katsaka levona raha mangatsiaka
▢2 ½ kaopy akoho nandrahoina na akoho rotisserie, voatetika
▢½ kapoaka pitipoà maitso levona raha mangatsiaka
▢1 sotro persily vaovao
▢1 fomba fahandro crust pie roa sosona
Afanaina hatramin'ny 400 ° F ny lafaoro.
Apetraka ovy voatetika ao anaty vilany misy rano. Kobanina mandrapaha malefaka ny ovy, 10 minitra eo ho eo. Arotsaho tsara.
Asio dibera ao anaty vilany. Manampia tongolo, tongolo gasy ary tsiro mahandro mandritra ny hafanana antonony mandra-pahalefaka azy, tokony ho 3-4 minitra. Manampia karaoty sy seleria ary andrahoy mandra-pahalotoana, manodidina ny 5-6 minitra eo ho eo. Atsofohy amin'ny katsaka.
Rarahana lafarinina amin'ny tongolo ary mahandro 1 minitra.
Kobohy amin'ny crème sy ny ron-kena akoho isaky ny mandeha mandra-malama. Toa ho matevina izany amin'ny voalohany. Manohiza manisy kely isaky ny mandoa whisk mandra-malama. Apetaho 1 minitra.
Manampia ovy sy pitipoà ary akoho efa ritra. Mahandro 1 minitra fanampiny. Atsofohy amin'ny persily. Andramo ary asao sira sy dipoavatra.
Alefaso lapoaly mofomamy 9 'miaraka amina crème pastry. Manampia famenoana ary apetaho miaraka amin'ny crème pie faharoa. Kapohina ny atody atody misy rano 1 sotro. Borosio amin'ny fefin'ny atody ilay creta pie. (Afafazo amin'ny anana vaovao sy / na sira kely halaliny raha tiana).
Manendasa 35-40 minitra. Afeno foil ny sisin'ny crust mandritra ny 15 minitra farany hialana amin'ny fandokoana be loatra.
Mialà sasatra 10-15 minitra alohan'ny hanapahana azy.
Ny famonoana mofomamy misy atody dia mamirapiratra sy volamena. Manamboatra paiso ho an'ny isam-batan'olona miaraka amin'ny Pastry Puff
Ampitomboy ny ranoka (broth / crème) amin'ny¼ kaopy.
Zaraina amin'ny lovia 6 azo antoka amin'ny lafaoro ny fangaro.
Maneteza ravina mofomamy puff ao anaty kianja malalaky ny 1 'isaky ny lovia tsirairay.
Maneteza silaka 4 isaky ny sombintsombiny mba hitsoahana ny etona. Drape puff mofomamy ambonin'ny lovia. Kapohina ny atody atody miaraka amin'ny crème 1 sotro fihosotra ary kobanina amin'ny mofomamy.
Mofomamy 25 minitra na mandra-pahatongan'ny volamena. Mandria 5-10 minitra alohan'ny hanompoana dia hafana be ny famenoana.
Kaloria:470,Karbohidraty:30h,Proteinina:27h,Tavy:27h,Tavy voky:13h,Trans Fat:1h,Cholesterol:134levitra,Sodium:451levitra,Potasioma:432levitra,Fibre:3h,Sugar:3h,Vitamina A:2781IU,Vitamina C:12levitra,Kalsioma:57levitra,Vy:3levitra
Teny lakilepiso akoho amam-borona akoho, fomba fahandro pie akoho amam-borona, pie akoho namboarina namboarina, fomba fanaovana pie akoho Mazava ho azyAkoho, sakafo hariva, sakafo atoandro, fotoam-pianarana lehibe masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady zahao eto ny politikako momba ny fampiasana sary .